‘प्रत्येक नागरिक समक्ष बैकिङ पहुच पु¥याउने लक्ष्य छ’ | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
‘प्रत्येक नागरिक समक्ष बैकिङ पहुच पु¥याउने लक्ष्य छ’
Published On : २८ पुष २०७६, सोमबार ०९:४८
बैंकिङ सेवालाई सर्वसाधारणको पहुँच सम्म पु¥याउन र सहज सेवा प्रदान गर्न बैंकहरुले नसकेको गुनासो बेलाबखत आईरहन्छ । बैंक धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिसप्रर्धा हुने गरेको चर्चा पनि सुनिन्छ । कुन बैंकलाई कति विश्वास गर्ने भन्ने सर्वसाधारणलाई ठम्याउन मुस्किल छ । धनीलाई धनी बनाउने संस्थाको रुपमा बैंकलाई लिने सर्वसाधारणको जमात कम्ती छैन । यो बुझाईलाई बैंकहरुले पनि बदल्न सकेका छैनन् । सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच सम्म बैंक पुग्न नसकेका हुन् कि सर्वसाधारण बैंक सम्म आउन नचाहेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिरहन्छ । गोरखामा एक दर्जन हाराहारी बैंकले सेवा दिइरहेका छन् । ती मध्येको एउटा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक पनि हो । यो बैंकले ग्राहकलाई कसरी सेवा दिइरहेको छ ? यीनै विषयमा दरौँदी दैनिकका लागि नरहरि सापकोटाले बाणिज्य बैंक गोरखाका प्रबन्धक कपील कार्कीसँग कुराकानी गरेका छन् ।
१) बाणिज्य बैंक गोरखा शाखाले कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गोरखा शाखाले २०२३ सालदेखी गोरखा जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । हाल यस शाखाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा एक्सटेन्सन काउन्टर, छेपटार, पालुङटार वारपाक र अश्राङ गरी ४ वटा द्यीद्य, शाखा भएको भवनमा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाको परिसरमा गरी २ वटा ATM मार्फत ग्राहकहरुलाई सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । निकट भविष्यमा सिउरेनी टारमा एक्सटेन्सन काउन्टर संचालनमा आउदैछ । त्यस्तै गोरखा जिल्लामा भच्चेक र आरुघाटमा समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखाहरुले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यस शाखामा करिव ५५,००० ग्राहकहरु रहनुभएको छ । त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा गरी करिव ७५ करोड लगानी रहेको छ ।
२) राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले लगानी गर्ने विशेष क्षेत्र कुन–कुन हो ? उपलब्धी कस्तो देखिन्छ ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले व्यापारीक कर्जा, घर कर्जा, कृषि तथा विपन्न वर्ग कर्जा, सुनचादी धितो कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, शिक्षक कर्जा, राष्ट्रसेवक कर्जा, गाडी कर्जा, हायरपर्चेज कर्जा, परियोजना कर्जा लगायत नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य प्राथामिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दै आइरहेको छ । समग्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलेसम्पूर्ण क्षेत्रमा सन्तोषजनक रुपमा लगानीगरेकोछ । गोरखा शाखाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा व्यापरिक कर्जा, बैंक जमानत, सूनचादी धितो कर्जा, कृषि कर्जा, घर कर्जा, शिक्षक कर्जा, राष्ट्रसेवक कर्जाहरुमा बढिलगानी रहेकोछ । साथै अन्य कर्जा शिर्षकहरुमा पनि सन्तोषजनक रुपमा लगानी भएको छ ।
३) कृषि क्षेत्रमा अनिबार्य गर्नुपर्ने भनिएको लगानी गर्नुभएको छ ? अन्य कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशतमा ऋण लगानी गर्नुहुन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पुर्ण क बर्गका बैंकहरुलाई समग्रमा आफ्नो कुल कर्जा लगानीको कम्तीमा १० प्रतिशत कृषिमा, १५ प्रतिशत उर्जा तथा पर्यटनमा र ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । तर प्रत्येक शाखाले यसरी लगानी गर्नुपर्ने भन्ने चाही होइन । किनभने सवै ठाउंहरुमा यि सवै क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर नहुन सक्छ । जस्तै गोरखा जिल्लाको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा बढी कर्जाको माग छ भने उर्जा र पर्यटनमा त्यती धेरै माग छैन । रा.वा.बैंक गोरखा शाखाको हकमा भन्नुपर्दाकृषि क्षेत्रमा बढि लगानी गरेका छौं । त्यस्तै सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रहरुमा पनि लगानी गरिरहेका छौं ।
४) अझैपनि किसानहरु बैंकमा सहज पहुँच भएन भन्ने गुनासो गर्छन नि ! किन होला ?
बैंकमा कर्जा लिनको लागी निश्चित प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै फर्म दर्ता गर्नूपर्ने, एब्ल् दर्ता, चलिरहेको फर्म भए कर कार्यालयमा बूझाए बमोजिमको लेखा परीक्षण भएको र अनूमानित वित्तिय विवरण, व्यक्तिगत/पारिवारिक विवरण संग सम्बन्धी कागजातहरु, धितो सम्बन्धी कागजातहरु पेश गर्ने आदी । कृषि कर्जाको हकमा व्यवसायिक योजना (व्यवसायकको आकार बमोजिम सामान्य, विस्तृत) समेत आवश्यक हुन्छ ।
कृषकहरुमा यस किसिमका जानकारीहरु नहूदा पनि कर्जा लिन समस्या भएको देखिन्छ । यस्ता विषयमा कृषकहरुलाई वित्तिय साक्षरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । वित्तिय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमहरु बैंकहरु, विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयहरुले संचालन गरिरहेपनि सो अपर्याप्त देखीन्छ । त्यसको लागी अझ सक्रियताका साथ सरोकारवालाहरु लाग्नुपर्ने देखीन्छ । साथै कृषकहरु आफै पनि यस्ता विषयमा चासो राखी कर्जा लिने प्रकृया, कर्जाको सेवा शुल्क, प्रचलित नियम, सरकारबाट पाइने अनुदान आदीका वारेमा बुझ्नु आवश्यक छ । सवै जनतामा वित्तिय पहुच पुर्याउन सरकारले सवै स्थानिय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैकको शाखा स्थापना गर्ने निति लिए अनुरुप सवै स्थानिय तहहरुमा बैंक पुगिसकेको अवस्था छ । कृषकहरुले आफ्नो नजिकको पायक पर्ने बैंकमा गएर कर्जा लिन सक्नुहुन्छ । सवै जनतामा वित्तिय पहुंच पुर्याउने हेतुले कुनैपनि बैंकमा खाता नभएका व्यक्तिहरु खाता खोल्न आएमा समृद्धि बचत खाता खोली रु १०० बैंकले नै जम्मा गरिदिने प्रावधान समेत रहेकोछ ।
५) लघु उद्यमी, किसान वा ब्यवशाय गर्न चाहनेले ऋण पाउने प्रक्रिया के हो ? वाणिज्य वैंकबाट कर्जा पाउन के के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ?
कर्जा कारोवार गर्न चाहनेले सर्वप्रथम बैंकमा गएर आफ्नो व्यवसायको बारेमा जानकारी दिएर कर्जा सम्बन्धी प्रकृया बुझेमासजिलो हुन्छ ।त्यसपछि बैंकबाट प्राप्त सुझाव बमोजिम कर्जा लिन योग्य भएमा आवश्यक कागजातहरु तयार गर्नुपर्दछ जस्तै फर्म दर्ता गर्नुपर्ने, एब्ल् दर्ता, चलिरहेको फर्म भए कर कार्यालयमा बुझाए बमोजिमको लेखा परीक्षण भएको र अनुमानित वित्तिय विवरण, व्यक्तिगत÷ पारिवारिक विवरण संग सम्बन्धी कागजातहरु, धितो सम्बन्धी कागजातहरु र नियमानुसार बैंकले माग गरेका अन्य कागजातहरु समावेश गरी बैंकमा निवेदन दिनुपर्दछ । ग्राहकबाट सम्पुर्ण कागजात प्राप्त भएपश्चात बैंकले परियोजना निरिक्षण, धितो निरिक्षण तथा मुल्याङकन गरिसकेपश्चात कर्जा स्वीकृती हुन्छ ।
६) वैंकहरुले धनीलाई झन धनी र गरिबलाई झन गरिव बनाउँछन् भनिछ नि, वैंकहरु गरिवको पहुँचमा पुग्न चाहँदैन भन्ने आरोप लाग्छ नि ?
बैंकहरु नाफामुखी हुने भएकोले कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरी धेरै प्रतिफल कमाउन चाहान्छन् । तर विगतमा पनि सरकारी स्तरका बैंकहरु ग्रामिण क्षेत्रसम्म गएर पनि सेवा दिएकै हुन् । हाल सरकारले पनि प्रत्येक नागरीक समक्ष बैकिङ पहुच पुर्याउने लक्ष्य सहित अघि बढेकोले केही हदसम्म बैंकिङ पहुंचमा बृद्धि भएको छ । गरिव जनता सम्म वित्तिइ पहुंच पुग्नको लागी ूद्यबलपष्लन ायच ग्लदबलपबदभिू सम्बन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु अत्यावश्यक छ । जनतामा बैकिङ पहुंच बृद्धि गर्न सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ । यसमा मुख्य भुमिका सरकार, वित्तिय संस्था र जनता स्वयंको हुनुपर्दछ । सर्वसाधारणहरुले पनि नजिकको बैंकमा गएर खाता खोल्ने, सानो सानो रकम पनि बैंक मार्फत कारोवार गर्ने, रेमिटान्स पठाउदा बैंकिङ च्यानल मार्फत पठाउने, कर्जा माग गर्दा आफ्नो व्यवसायको लागी आवश्यक रकम मात्र माग गर्ने, फजूल खर्च र व्यक्तिगत सर सापट तिर्नको लागी कर्जा माग नगर्ने, कर्जा लिदा त्यसमा लाग्ने सेवा शूल्क, व्याजदर, किस्ता रकम, समयावधी आदी बारेमा बुझेर लिने गर्नुपर्दछ । बैकिङ कारोवार गर्दा बुझेर गरेमा धनिलाइ मात्र होइन गरीवलाइ पनि फाइदा नै हुन्छ ।
७) सरकारी बैंक भएकाले कर्मचारीले ढिला काम गर्ने, रुखो ब्यवहार गर्छन् भन्ने गुनासो पनि कहिलेकाँही आइरहन्छ नि !
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक धेरै पुरानो र प्रतिष्ठित बैंक हो, अन्य बैंकहरुमा भन्दा हाम्रा ग्राहकहरु निकै बढिहुनुहुन्छ ।त्यसमा पनि युवा देखी प्रौढ सम्म सवै उमेरका ग्राहकहरु उल्लेख्य हुनुहुन्छ । कतिपय पुराना ग्राहकहरुलाई हाल बैकिङ प्रणालीमा भएका परिवर्तनहरु बढि झन्झटिला लाग्नु स्वभाविक पनि हो । पहिले पहिले बैकिङ कारोवार गर्न सजिलो थियो, चिनजानको आधारमा, व्यवहारिकता हेरेर पनि कतिपय अप्ठयारा काम सहजै हुन्थ्यो भने हाल विभिन्न राष्टिूय अन्तराष्टिूय नियम कानुनहरु परिवर्तन भइरहने र सो निकै कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीकहां कुनै काम प्रकृयागत रुपमा नै समय लाग्ने अथवा नियमानुसार गर्न नमिल्ने काम नभएपनि सरकारी बैंक त हो भन्ने परिपाटी छ, त्यो सोचाइ गलत हो । सिमीत कर्मचारीहरु बाट धेरै सेवाग्राहीहरुलाइ सेवा प्रदान गर्दा केही ढिलो भएको महसुस भएको हो, त्यसको सुधारको लागी हामीले प्रयत्न गरिरहेकाछौं ।त्यस्तै कर्मचारीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हाल सवैजसो कर्मचारीहरु युवा हुनुहुन्छ। उहांहरुको काम गर्ने तरिका र कामको गति अन्य बैंकका कर्मचारीहरुको भन्दा कम छैंन ।
८) गोरखामा रहेका वाणिज्य वैंक तथा विकास वैँकहरुको भीडमा राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले फरक सेवा अर्थात फरक स्वाद के दिइरहेको छ ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गोरखा शाखाले अन्य बाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गर्ने जस्ता सम्पुर्ण सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ । त्यस बाहेक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गोरखा शाखाले यस जिल्लामा सरकारी तथा राजश्व कारोवार, नोटकोष कारोवार, निबृत कर्मचारीहरुलाई पेन्सन भूक्तानी गर्ने, सुनचादी कर्जा लगानी गर्ने कार्यहरु गर्दे आइरहेको छ ।
९) यस वैंकले आफ्ना ग्राहकलाई कसरी आर्थिक रुपमा संवृद्धि गराउन सक्छ ? आफ्ना ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउने खालका कार्यक्रमहरु के के छन् ?
हामीले ठुला ठुला कर्जा तथा शहरी क्षेत्रका ग्राहकहरुलाइ मात्र फोकस नगरी ग्रामिण क्षेत्रका कृषक, विपन्न वर्गका लगायत सवै वर्गका ग्राहकहरुलाइ सेवा प्रवाह गरिरहेकाछौं । हामी संग कर्जा कारोवार गरेका कतिपय विपन्न वर्गका तथा ग्रामिण भेगका ग्राहकहरुले धेरै प्रगती गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । अन्य बैंकहरुको भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा पाउने भएकोले कर्जा लिएर सही सदुपयोग गरेमा ग्राहकहरुले निकै आर्थिक लाभ लिन सक्नुहुन्छ । आफ्ना ग्राहकहरुलाई सन्तुष्ट बनाउनको लागी यस बैंकले निक्षेपमा दिने व्याजदर पनि उच्च रहेकोछ । साधारण बचतमा ४ प्रतिशत र अन्य खाताहरु जस्तै कर्मचारीहरुको तलवी बचत खाता, नेपाल प्रहरी बचत खाता, शसस्त्र प्रहरी बचत खाता, नेपाली सेना बचत खाता, कर्मयोगी बचत खाता, महिलाहरुको लागी महालक्ष्मी बचत खाता, छुनामुना बचत खाता लगायतमा ६ प्रतिशत र मुद्धती खातामा ९.७५ प्रतिशत सम्म व्याजदर रहेको छ । त्यस्तै यस बैंकले कर्जामा लिने व्याजदर अन्य बैंकहरुको भन्दा निकै कम रहेको छ । यसका साथै मोवाइल बैंकिङ, ATM, E-Banking, C-ASBA, DMAT, IPS लगायतआध्ुनिक बैंकिङ सेवाहरु समेत प्रदान गरिरहेका छौं ।
१०) राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक आम ग्राहकको हितमा छ भनेर दाबी गर्ने आधारहरु के छन् ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एक मात्र पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक हो । यस बैंकले खाली नाफालाई मात्र ध्यान नदिइ धरै भन्दा धेरै जनतालाइ वित्तिय सेवा प्रदान गरी देशको आर्थिक बृद्धिमा सघाउ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकोले यस बैकमा जम्मा गर्ने निक्षप अत्यन्त सूरक्षित रहेको ग्राहकवर्गहरु बाटै सुन्न पाइन्छ । यसका साथै यस बैंकले सरकारले लागु गरेका आर्थिक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ । यस बैंकले निक्षेपमा दिने व्याजर अन्य बैंकहरु सरह उच्चतम रहेको र कर्जामा लिने व्याजदर अन्य बैंकहरुको भन्दा न्युन रहेको छ । त्यस्तै रा.वा.बैंकले देशका ७७ वटैै जिल्लाबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
११) हाम्रो जस्तो जिल्लामा वैंकिङ गतिविधिमा कत्तिको जोखिम देख्नुभएको छ ? वैंकका सामु चुनौती र समस्या के(के छन्, र समाधानको लागि के गर्नु पर्ला ?
आजकल बैंकिङ गतिविधिमा विभिन्न जोखिमहरु देखापरिरहेका छन् । ति जोखिमहरु बढि प्रविधि संग सम्बन्धीत जस्तै ATM, E-BANKING, MOBILE BANKING, SYSTEM HAKING, Money Laundring आदी हुनेहुंदा जुनसुकै ठाउंमा पनि अयखभचबनभ हुनसक्छ । गोरखा जिल्लाको कुरा गर्नुपर्दा माथि उल्लेख गरेजस्ता जोखिम बाहेक चीन संगको सिमाना मार्फत हुन सक्ने वित्तिय अपराध, वित्तिय साक्षरताको अभावले गर्दा निर्दोष र अनपढ व्यक्तिहरुलाइ प्रयोग गरी अपराधीले अनुचित फाइदा लिनसक्ने जोखिम उच्च देखिन्छ । त्यस्तो जोखिमहरु बाट सर्वसाधारण र बैंकलाइ समेत बचाउनुपर्ने चुनौति बैंकका सामु छन् । यस्तो चुनौती तथा समस्या समधानको लागी सरोकारवाला सवैले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई यस्ता जोखमबाट बच्न सचेत गराउने, ग्राहकको खाता तथा जानकारी अति गोप्य राख्ने, कर्मचारीहरुलाइ यस्ता जोखिम सम्बन्धमा सचेत गराइ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चुस्त बनाउने, सुरक्षित र भरपर्दो कयातधबचभ प्रयोग गर्ने, ग्राहकलाइ दिनुपर्ने संबेदशिल चिजहरु जस्तै चेकबुक, ATM Card, Pin code हरुमा अति सुरक्षित र गोप्यता कायम गर्नै गर्नुपर्दछ । साथै ग्राहकवर्गहरुले पनि आफ्नो खाताको बारे अनावश्यक व्यक्तिहरुलाइ जानकारी नदिने, चेकबुक,ATM Card, Pin code अति सुरक्षित र गोप्य राख्ने, बेला बेलामा बैंकमा गइ खाताको स्टेटमेन्ट लिइ जांच गर्ने, समय समयमा ATM मोवाइल बैंकिङ, इ बैकिङ लगायतको एष्ल अयमभ परिवर्तन गर्ने, समयमै KYC अद्यावधिक गर्नै गरेमा जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
१२) अन्त्यामा बाणिज्य बैंकका ग्राहकलाई वा बैंक सम्म आईपुग्न नसकेकाहरुलाई केही भन्न चाहानुहुन्छ ?
बैंकका ग्राहक वर्गहरुमा छरितो र भरपर्दो सेवा उपलब्त्र गराउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गोरखा शाखा सदैव तत्पर रहको छ । बैंक सम्म आइपुग्न नसक्ने महानुभावहरुलाई पनि आफ्नो वित्तिय कारोवार बैंकमार्फत गर्न अनुरोध गर्दछु । सम्पुर्ण ग्राहकववर्गहरुको माया, सद्भाव, साथ र सहयोग सदैव प्राप्त गरिरहने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।